Alahady 11 Jolay 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Ivom-bokatry ny Sampana Tanora Kristiana (STK)
“ MIORENA AMIN’NY ANTSON’NY TOMPO ”
“Izaho no vavahady ; raha Izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina… Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be” JAO 10 : 9,10b
Ny fotoam-bavaka azo natrehina mivantana tao an-tranon’Andriamanitra tamin’ny 9 ora maraina izao taterina eto izao.
Ny tompon’andraikitry ny sokajy aim-panahy ao amin’ny STK ANDRIANARIVO Fiderana no nitarika ny fotoana. Ny mpiomana ho Mpitandrina RAKOTOMALALA Finaritra, taona fahatelo ao amin’ny Faculté de théologie Ambatonakanga, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana.
Taorian’ny feon-javamaneno fidiran’ny tanora hamonjy ny toerany dia nanao ny anjara hirany izy ireo “ANARANA MAHERY”. Nisy ny fiarahabana apostolika, ny SALAMO 29 : 1-2 no niarahana namaky teo am-pitsanganana, izay manao hoe : “Manomeza an’i Jehovah, ry zanak’Andriamanitra. Eny, manomeza voninahitra sy hery ho an’i Jehovah. Omeo an’i Jehovah ny voninahitry ny anarany ; miankohofa eo anatrehan’i Jehovah amin’ny fihaingoana masina”. Ny hira FFPM 18 : 1,2,3 “NY FEONAY REHETRA IZAO” no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny I KOR 15 ; 58a ; ROM 12 : 11 ; APO 3: 11b manao hoe : “Koa amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo”… Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo”… Tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao”. Natao ny hira FFPM 242 : 4 “MISAOTRA ANAO IZAHAY, RY RAY”dia nisy vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 403 : 1 “RY JESOA TOMPO TSARA Ô!”. Nisy ny Teny famelan-keloka nomena ny Fiangonana teo am-pitsanganana manao hoe : “Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao”… “ Avia ary hifandahatra isika, hoy Jehovah : na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny orampanala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon’ondry fotsy”… “ Izay milaza fa ao amin’ny mazava izy, kanefa mankahala ny rahalahiny, dia mbola ao amin’ny maizina ihany” (JER 31 : 3 ; ISA 1 : 18 ; I JAO 1 : 9). Nohiraina ny FFPM 489 : 1 “TENA SAMBATRA SY MAHA-TE HO TIA”. Notononina ny fanekem-pinoana nikeana (laharana II). Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy.
RAMBELOSON Mitsoa mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy faha-9 no nitarika izany. Nisy vavaka. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia : « Antsoy Aho dia hovaliako ianao » JER 33 : 3a. Andriamanitra no miteny eto. Toy laharana hahazoantsika an’Andriamanitra izany. Misy ny fifandraisantsika amin’ny olona tsy mety rehefa miantso azy ireo isika fa tsy mba toy izany amin’Andriamanitra : eo hatrany Izy ary mamaly antsika. aza adinoina ny miantso Azy.Nohirain’ny ankizy sy ny tanora ary ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny FFPM 772 :6,7 “MANATÒNA, MANATÒNA”.
TATITRY NY ASAN’NY STK
Ny mpitantsoratra voalohany RAMANANJOELINA Natacha no nanao izany tatitra izany. Rehefa izany dia ny mpitantsoratra faharoa RAJAONARIVELO Nomena no nanatontosa ny famakiana ny hafatra avy amin’ny Foibe FJKM. Nisongadina tamin’izany fa nisy famoahana fihirana mirakitra ny hiran’ny STK manerana an’i Madagasikara ary ny fihaonambe dia kasaina hatao any Toamasina amin’ny volana septambra 2021 raha sitrapon’Andriamanitra. Taorian’izany dia nanao ny hira “IZAY NAHARESY”ny sampana STK.
RAKOTOMANANA Andrimbazotiana no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny I KOR 3 : 17b. Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka :
Herinandrom-bokatry ny VFL hanomboka ny alatsinainy 12 jolay 2021 ;
Fivorian’ny mpihevi-draharaha ny sabotsy 17 jolay 2021 amin’ny 8 ora maraina ao amin’ny Akany Rainimamonjy ;
Fotoam-bavaka fankasitrahana an-dRAZAFINDRATRIMO Alain, Filoha mpanorina ny VPL SPAA 10 ny sabotsy 17 jolay 2021 amin’ny 9 ora sy sasany maraina hialohavan’ny antsan-kira ;
Fanadinana Sekoly Alahady K1-5 ny alahady 18 jolay 2021 eto am-piangonana sy famaranana ny taom-pianarana ;
Fanasana avy amin’ny Mpitandrina zanaky ny Fiangonana miana-draharaha amin’ny fanohanan-kevitra an-dRAMILISON Diamondra ny talata 20 jolay 2021 amin’ny 10 ora maraina ao amin’ny Faculté de théologie Ambatonakanga mitondra ny lohateny hoe : “L’homme nouveau face au péché et perfection”; amin’ny 1 ora tolakandro an’ANDRIATSILAVINA Nofy
Concert d’orgue karakarain’ny RFF ny alahady 25 jolay 2021 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro
Famoahana sy fitsofan-drano Mpitandrina ny alahady 25 jolay 2021 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro ao Antsahamanitra ;
ny Synoda Lehiben’ny FJKM izay kasaina hatao any Sambava.
Nisy fanentanana momba ny fitandremana ny fahasalamana.
Nandray fitenenana ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina nampahafantatra fa izay katekista sy mpitoriteny nivoaka avy tao amin’ny SEFALA fa tsy diakona dia manao akanjom-panompoana rehefa mitarika fotoam-bavaka. Nentanina ny fikambanana hanotrona an-dRAZAFINDRATRIMO Alain (filohan’ny FDL) amin’ny sabotsy. Nisy mpivady vao nanorina ny tokantranony natsangana miaraka amin’ny fianakaviany, narahabaina, nirariana soa ary nentina amim-bavaka.
RANAIVOSON Jacky no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I KOR 1 : 9 izy. Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : misaotra an’Andriamanitra fa nisondrotra kilasy ny zanany ary nanolotena ho an’ny asa fanompoana ; fianakaviana nandray fitahiana avy tamin’Andriamanitra ; tanora mianadahy afaka fanadinana ; renim-pianakaviana nahazo valim-bavaka ; tanora nahavita ny fanamasinana ny fanambadiany ; fianakaviana nahavita trano sy mankalaza tsingerintaona. Ao koa ireo nangata-bavaka ho amin’ny tohin’ny fianarana ; ho an’ny ankohonany ; fa manana olana ara-bola ; fianakaviana namoy ray.
Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ireo finoana ireto izay nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanatazana ny rakitra dia : “FANAHY Ô” an’ny STK, FFPM 295 : 1 “MIORENA MAFY TSARA”(feo fifohazana) ; FF 12 : 1 “AM-PELATANANAO” ; HF 39 “TOMPO Ô IZAY MAHITA”; HF 43 “VAVAKA” ; HF 14 : 1 “HALELOIA”.
Ny hira vavaka FFPM 441 : 2,3 “RAISO AHO, TOMPO Ô!” no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.
Nohiraina ny FFPM 177 : 1,2 “RY FANAHY MPANAZAVA, MITARIHA”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ANDRIAMAMPIANINA Toky Harijesy. ANDRIAMIHAJA Michel no namaky ny EKS 3 : 7-14 raha RAVOKATRA Tsiky Harimalala no namaky ny ao amin’ny JAO 10 : 1-10 sy ASA 7 : 30-38. Natao teo am-pitsanganana ny FF 52 : 1,2 “AVIA, TORIO KRISTY”, toriteny no nanaraka izany.
JAO 10 no nakana ny hafatra, izay tantara fanoharana ny amin’ny mpiandry ondry. Eo amin’ny toko faha-9 dia nanasitrana ny jamba sy ny marary tamin’ny andro sabata i Jesoa ka nampirehitra ny fahatezeran’ny Fariseo, Jesoa mamaly eo amin’ny toko faha-10 ny antony nanasitranany tamin’ny andro sabata. Ny tanjony ho amin’ny fiainantsika dia eo amin’ny and.10b : “Izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be ”.
Ho amin’ny fiadanana no niantsoany anao ary mba tena hizara izany.
Raha miantso sy manasitrana Jesoa dia ho amin’ny fiainana sy fiadanana. Amin’ny tanora ny manao fiainana dia fanaovana izay tiana, tsy misy teritery. Ho an’ny ray aman-dreny kosa izany fiadanana izany dia milamina, tsy misy korontana. Ho an’ny kristiana dia mitovy ny famaritana ny fiainana mandrakizay ao amin’i Jesoa : ny fiainana dia fitaovana entina miaina, Izy mihitsy no miditra eo amin’ny fiarahamonina raha miantso antsika hanao ny asany Izy. Matoa mbola tsy milamina ny fiainantsika amin’ny sehatra misy antsika, sao dia tsy mbola i Jesoa no fofonaina mahavelona anao ? Tsy hoe manasitrana fotsiny i Jesoa fa te-hanome fiainana. Fantany ny fitarainana sy fikasan’ilay jamba dia nomeny azy ny fahiratana.
Jesoa Kristy mihitsy no loharanom-piadanana. Tsy ho amin’ny fiadanana ihany fa hoy Izy hoe “midìra” izay mitaky fanolorantena sy fahavononana. Mila mamaly ny antso isika, mandray, miditra amin’ny vavahady araka ny eo amin’ny and.7. Jesoa no miaro ny fiainantsika amin’ny fahavalo rehetra : ny rotoroto, ny tebiteby amin’ny fivelomana, ny asa aman-draharaha, ny fianarana… Jesoa ilay vavahady ka rehefa eo Izy dia mandry tsara ny ondry. Jesoa ilay fefy dia tsy ho azon’ny loza izaho sy ianao (and.9) fa hovonjena. Rehefa Jesoa no vavahadinao dia Izy no mampandeha anao (miditra sy mivoaka) mba hilamina tsara ny fiainanao.
“Sady hahazo hanina” : ny sakafom-panahy dia tsy tokony hoadinointsika. Mila mandini-tena isika raha ampy sakafo tsara ny vatana, saina, fanahintsika. Misitraka sakafo ny vatana intelo isan’andro, impiry isan’andro no sokafanao ny Baibolinao ? Ilaintsika mihitsy ny miditra amin’ny fiadanana, mila finiavana avy amintsika ny fandraisana izany. Vao miditra eny amin’ny vavahady isika alohan’ny hiangona dia mila miteny hoe : “vonona handray Anao aho Jesoa” dia mifantoka amin’ny litorjia, manontolo (fiderana, famelan-keloka, rakitra, tsodrano…,) fa tsy toriteny ihany. ‘Ndeha manomboka izao hozarintsika amin’ny sakafo ara-panahy ny fiainantsika.
Nanao hira ny STK “MANDINIHA HELY” (ny tononkira nalefa teny amin’ny fafana).
Nanana fotoana lava nieritreretana sy nandinihana ny fiainanao ianao. Efa namaly ny antsony ve ianao ? Tena efa niditra amin’ny fiadanana sa mody fanina ? Vitan’ny Tompo ny famonjena na tsy hamaly ny antso aza ianao fa matoa Izy miantso anao dia mbola mila anao Izy, “ny ondry manaraka azy satria mihaino ny feony ireo”. Jesoa dia mahafantatra antsika ary isika izay mahalala Azy koa tsy tokony hanaraka feo hafa ankoatra ny feony.
Zarao ny fiadanana : Ilay fiainana omena antsika dia mihoatra lavitra mba hizarana ny fiadanana. Izay no andrasan’ny Tompo aminao. Matoa mbola misy kristiana tsy manana dia misy tsy mizara.
“Sady hananany be dia be”: misy fadiranovana ara-panahy, mba te-hihaino ihany izy, misy olona te-handalina fa tsy mahay. Anjaranao amin’izay ny mizara rehefa vita ny eto. Ny tanora manana hery sy tanjaka mba efa nizara izany ho an’ny hafa ve ianao ? Fandehanana amin’ny toerana misy ray aman-dreny ohatra. Ilay fifaliampo no tokony hozaraintsika. Ampiasainao anaovana inona ny fahatanoranao ? Indray mipì-maso io dia mety hesorin’Andriamanitra aminao rehefa tsy hozaraina. Zarao ilay fiadanana ao aminao fa aza kobonina ho anao samirery. Andriamanitra no efa manome lalana, araka ny ao amin’ny Eksodosy “homba anao Aho”. Aza matahotra raha irahina ianao satria nomena mihoatra : Andriamanitra mihitsy no hialoha lalana anao. Mila fitehirizana ilay Fanahy hahantanteraka ilay asa niantsoana antsika eo anivon’ny fiarahamonona dia vitao hatramin’ny farany izany. Ny anjara vavakao dia hoe “tehirizo aho, Tompo ô! haharitra hanao ny asanao”. Nanao ny hira “TEHIRIZO AHO” ny STK.
Raha ray aman-dreny ianao zarao amin’ny ankohonanao ny fiadanana (tsy mitondra na maka lagy ao an-trano).
Ho amin’ny fiadanana no iantsoana anao : midìra amin’izany fiadanana izany mba ho tena Jesoa Kristy no fofon’aina mahavelona hitondra anao, zarao izany fiadanana izany ho an’ny manodidina anao.
Nisy feon-javamaneno fohy. Nohiran’ny STK ny “ MANAOVA NY METY ”. narahin’ny vavaka fangataham-pitahiana.
Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitarika izany vavaka izany. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana mba hampiharana izany eo amin’ny fiainana. Nivavaka koa izy ho an’ny fiainan’ny Fiangonana, ny mpitory Filazantsara rehetra, ny mpitaiza eny amin’ny toby rehetra mba hiaina fiadanana ; ny Birao sy ny mpiandraikitra foibe, ny Synoda Lehibe amin’ny volana aogositra ; ny SPAA10 ; ny rafitra mijoro eto amin’ny fitandremana ; ny STK mankalaza ny alahady fanateram-bokatra anio ; ny fikambanana manao fankalazana amin’ity taona ity ; ny kristiana rehetra ; ny sahirana, marary, mana-manjo. Voatonona koa ny faniriana mba ho levona ny herin’ny aretina amin’ny endriny samihafa ka ho salama sy haharitra amin’ny firaisana amin’Andriamanitra ny mpanompony rehetra ; ny manana hataka manokana ; ireo nanao raki-pisaorana sy nangata-bavaka. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny fangatahana.
Ny hira FFPM 813 : 1 “TIA ZAZA no nataon’ny Fiangonana nandritra ny firosoan’ny ray aman-dreny teo amin’ny alitara. Nisy teny fanorenana, fanekena nataon’ny ray aman-dreny nanolotra ny zanany hatao batisa, vavaka nataon’ny Mpitandrina. Nisitraka ny sakramenta RAKOTOARISOA Ranty dia nisy vavaka sy Teny fanomezan-toky..
Natao avy hatrany ny hira FFPM 332 : 1 “FINARITRA NY OLONAO” raha namonjy ny toerany ny ray aman-dreny sy zaza natao batisa. Notononina ny tondrozotra 2021 hoe : “ Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara… Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara ”. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 336 : 1 “AMPODIO IZAHAY, JEHOVAH”. Nisy vavaka mangina sy trinite ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 11 ora sy 52 minitra ny fotoana.
Nitendry orga : RAJAOFETRA John & HARENTSOA Rova
Fafana : RABIAZAMAHOLY Mahery
Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Fifandraisana sy Vaomieran’ny Asa Vavolombelona